DAAWO:-Midowga Musharaxiinta oo magacaabay guddiga bad-baadinta doorashooyinka | Wardoon
Home Somali News DAAWO:-Midowga Musharaxiinta oo magacaabay guddiga bad-baadinta doorashooyinka
DAAWO:-Midowga Musharaxiinta oo magacaabay guddiga bad-baadinta doorashooyinka
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa maanta magacabay guddi ka kooban 28 xubnood, oo loogu magac daray Guddiga Badbaadinta Doorashooyinka Dalka.
Guddigan ayaa waxaa lagu magacaabay shir ay musharaxiinta maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho.
Afhayeenka Midowga Musharrixiinta, Ridwaan Xirsi ayaa sheegay in guddiga ay magacaabeen ay ka shaqeynayaan sidii ay doorasho xor iyo xalaal ah oo qof walba ku qanacsan yahay dalkan uga dhici laheyd.
Magacaabista guddigan ayaa imaneysa, ayada oo Guddiga doorashada heer federaal ay maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ku doorteen guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa. Maxamed Xasan Maxamed ayaa loo doortay Maxamed Xasan, halka Mowliid Mataan loo doortay guddoomiye ku-xigeen.
Labada tallaabo ee ay maanta kala qaadeen Mucaaradka iyo Dowladda ayaa u muuqda kuwa la isugu jawaabayo, xilli ay sii fogaaneyso xaaladda dalka iyo khilaafka jira kadib markii dowladda ay diiday inay guddiyada doorasho ka saarto xubnaha dowladda iyo askarta.
Musharaxiinta Mucaaradka ayaa sidoo kale shirkii ay maanta yeesheen walaac uga muujiyeen waxyaabo badan oo dalka ka jira oo ay ugu horreeyan qalqalka siyaasadeed ee ka jira maamul goboleedyada qaar sida HirShabelle oo ay xaalad xumi ka taagan tahay iyo sidoo kale Jubbaland oo arrimo badani ka jiraan.
Waxyaabaha ay soo hadal qaadeen waxaa ka mid ah bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya, iyadoo ay aad usoo dhawaaneyso wakhtiga loo jaangooyay joogitaanka ciidamada miwodga Afrika ee AMISOM iyo waxyaabo kale oo ay dowladda ku eedeeyeen iney qeyb ka tahay.
Ugu dambeyntii, waxay golaha musharaxiinta ugu baaqeen dowladda Federaalka ineysan ka leex leexan waxyaabaha ay doonayaan isla markana ay garwaaqsato iney dalka ka qabato doorasho la isla ogolyahay oo ay dadka oo dhami u siman yahiin.
Sidoo kale waxay dowladda Federaalka ugu baaqeen iney ka waantowdo in la abuuro xaalad aan la mahdin, sidoo kalana aan la qabanin doorasho sax ah maadaama ay ilaa iyo hadda dowladdu wax jawaab ah ka bixin go’aamadii ay soo saareen.
Previous articleDAAWO:-Musharaxiinta oo shaaciyey ‘in boob lagu billaabay shidaalka somalia
Next articleWaa kuma ninka loo doortay Guddoomiyaha Guddiga doorashada?
Maraykanka oo diiday xil ka qaadistii Kheyre
DAAWO:-“Cali Guudlaawe Ayaa Caqabad Ku Ah Doorashada”